HAMECONS MONTES SENSAS GROS POISSONS 60CM HAMECONS MONTES SENSAS GROS POISSONS 60CM Pechechassediscount.com
Accueil > COUP > Hameçons et Flotteurs Coup > HAMECONS MONTES SENSAS GROS POISSONS 60CM
HAMECONS MONTES SENSAS GROS POISSONS 60CM :
-Spécialement adapté aux pêches de gros poissons.
-Version N°1 : H 20 sur nylon de 10-100.
-Version N°2 : H 18 sur nylon de 12-100.
-Version N°3 : H 16 sur nylon de 14-100.
-Version N°4 : H 14 sur nylon de 16-100.
-Version N°5 : H 18 sur nylon de 10-100.
-Version N°6 : H 16 sur nylon de 12-100.
-Version N°7 : H 14 sur nylon de 14-100.
-Version N°8 : H 12 sur nylon de 16-100.